Tirada dhimashada Covid-19 ee Caalamka ayaa kor u dhaaftay... - Axadle | Wararka Maanta – The one stop destination for Somalia
Tirada dhimashada Covid-19 ee Caalamka ayaa kor u dhaaftay…
Tirada kiisaska cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ ee qaarada Yurub ayaa kor u dhaaftay 250,000, in ka badan kalabar dadlkaasi waa muwaadiniin u dhashay wadamada Italy iyo Spain.
Spain ayaa diiwaangelisay 655 dhimasho – waxeyna hoos uga dhacday arbacadii oo ay dhinteen in kabadan 700 qof, halka Talyaanigana uu sheegtay dhimashada 662 kaliya maanta oo Khamiis eheed.
Inka badan seddex milyan oo Mareykan ah ayaa gudbiyay codsiyada caymiska shaqo la’aanta usbuucii la soo dhaafay ka dib markii cudurka dilaaga coronavirus uu hoos dhigay shaqada laheli karo ee dalkaasi.
In kabadan 495,000 oo qof oo ku nool daafaha dunida ayaa laga helay COVID-19, sida lagu sheegay xog aruurinta jaamacadda Johns Hopkins. Ku dhawaad ​​120,000 ayaa soo kabsaday, halka in kabadan 22,000 oo qof ay dhinteen.